Sidee Suuq-geynta Bulshadu ugu xirmay Xayeysiinta Dhaqanka | Martech Zone
Anigu kama soo horjeedin xayeysiinta iyo bixinta dallacsiinta, laakiin milkiileyaal badan oo ganacsi iyo xitaa kuwa suuqleyda ah ma kala soocaan farqiga. Badanaa, suuqgeynta bulshada waxaa loo arkaa mid kale channel. In kasta oo ay tahay istiraatiijiyad dheeri ah oo lagu daro suuqgeyntaada, bulshada waxay siisaa fursad aad uga duwan.
Warbaahinta bulshada ayaa carqaladeynaysay muuqaalka xayaysiinta tan iyo markii ay ku soo duushay goobta waxayna soo bandhigtay jaangooyooyin la raadin karo oo ay kaliya ku riyoodaan suuqyadu. Iyada oo xaddiga xad-dhaafka ah ee UGC la daabaco maalin kasta, su'aal kama taagna in suuq-geynta bulshada ay tahay mid qiimo leh oo loogu talagalay xayeysiinta la beegsanayo, jiilka hoggaaminta iyo ka-qaybgalka labada dhinac. Brightkit, Sida Loo Qiimeeyo Suuqgeynta Bulshada
Xayeysiintu inta badan waa istiraatiijiyad wacyi gelin ah, ee ma ahan istiraatiijiyad xiriir. Si toos ah ugama jawaabi karo xayeysiiska telefishanka ama raadiyaha… ama xitaa xayeysiinta dhijitaalka ah ee qadka. Laakiin waan ka jawaab celin karaa, ka dhawaajin karaa ama ka jawaabi karaa suuqgeynta bulshada. Warbaahinta bulshada ayaa siisa habka ugu wax ku oolka badan uguna waxtarka badan ee lagu caawiyo erayga ku saabsan suuqgeynta afka taariikhda - shirkaddiisuna waa inay wax ka barto. Sidoo kale, markii maalgalintaada ololaha ay qallajisay, sidaas oo kale xayeysiimahaagu. Laakiin waxyaabaha lagu wadaago warbaahinta bulshada ayaa socon kara sanado.
Tags: aragtida macaamiishaaaladaha dijitaalka ahemailFacebookxayeysiiska googleInstagramsuuq geyn isku dhafanjiilka ledtartanka suuqgeyntawada gaadhcabirrada la cabbiri karoPinterestSEOwaxyaabaha la wadaagi karosuuq-geynta suuqatartanka suuqgeynta bulshadagaarsiinta bulshadaxayeysiinta la beegsadayxayaysiis dhaqameedTwitterhawlgal laba dhinac ahtusmada muuqaalkajiilka diiran hogaanka